SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Bicol Bislama Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Dangme Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Mixe (North Central) Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Zulu
“Kambani yedu ine rimwe basa rainoitira hurumende. Kazhinji tinopedza mwedzi miviri kana mitatu tisati tabhadharwa. Asi nguva ichangopfuura iyi ndakafonerwa nemumwe mushandi wehurumende. Akati kana tikamupa chiokomuhomwe aigona kuita kuti tikurumidze kubhadharwa.”—JOHN. *
WAKAMBOITIRWA uori here? Pamwe hauna hako kuitirwa hwakafanana nehwataurwa pamusoro apa, asi panofanira kunge paine zvimwe zvakamboitika kwauri zvakonzerwa nouri.
Sangano rinonzi Transparency International rakaita ongororo yenyika 183 muna 2011 uye rakaona kuti panyika idzi, “zhinji dzacho dzaiva neuori hwakanyanyisa.” Muna 2009, sangano iri rakanga raita imwe ongororo yakabudisa kuti uori hwakapararira chaizvo. Ongororo iyi inobudiswa gore negore yakati: “Zviri pachena kuti munyika yose hapana kusina dambudziko rouori.”
“Uori kushandisa zvisizvo simba raunaro kuti ugutse dumbu rako. Hunorwadza vaya vanenge vachivimba newe vachitotiwo basa rako ndiro rinoita kuti vawane chouviri kana kuti mufaro muupenyu.”—TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Pamwe pacho uori hunogona kutourayisa. Somuenzaniso, magazini inonzi Time yakati “uori nokushaya hanya” ndizvo zvimwe zvakaita kuti pafe vanhu vakawanda chaizvo pakadengenyeka nyika yeHaiti muna 2010. Yakatiwo: “Zvivako zvacho zvinongovakwa pasina mainjiniya uye vashandi vehurumende vanoongorora zvivako izvi vanopiwa chiokomuhomwe.”
Pane chichapedza zvachose dambudziko rouori here? Kuti tipindure mubvunzo uyu tinofanira kutanga taziva zvacho zvinombokonzera uori. Tichazvikurukura munyaya inotevera.
^ ndima 2 Zita rakachinjwa.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Uori​—Hwapararira Zvakadini?
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI Uori—Hwapararira Zvakadini?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe NHARIREYOMURINDI Uori—Hwapararira Zvakadini?
NHARIREYOMURINDI Uori—Hwapararira Zvakadini?